किन भयो पल पुजामा ठुस्का–ठुस्की ? (भिडियो) | Radio Langtang 90.3 Mhz
किन भयो पल पुजामा ठुस्का–ठुस्की ? (भिडियो)
Post on: July 4, 2017
असार ३० गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को तश्रो गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बोलको शिर्ष गीतमा पल र पुजालाई नै फिचरिङ गरिएको छ । उनीहरु दुवैलाई गीतको भिडियोमा निराश मुद्रामा देखिएको छ ।
प्रमोद खरेल र अञ्जु पन्तको स्वरमा रहेको गीतमा चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको छ । गीतमा देखिएका निकै मनमोहक र लोभलाग्दो दृश्यहरु संजय लामाले खिचेका हुन् । भिडियोलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफ गरेका हुन् भने गीतको शब्द दिग्गज धौरलीले लेखेका हुन् ।
सुदर्शन थापा प्रोडक्सननको प्रस्तुतीमा बनेको फिल्ममा स्वयं निर्देश सुदर्शन थापा र नायिका पुजा शर्माको लगानी रहेको छ । चलचित्रमा पल शाह, पुजा शर्मा, सरोज खनाल, रुपा राणा, राजाराम पौडेल, मोहन निरौला, नविन मानन्धर लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । हेरौँ भिडियोः
सरकारलाई आयोगको पत्रः ऐन कानुन देऊ, प्रदेश तथा संसदको चुनाव घोषणा गर
रसुवागढी नाका ७२ घण्टाका लागि बन्द
रसुवा, ७ मंसिर, यही मंसिर १० गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आजदेखि रसुवागढी नाका बन्द गरिएको ...
हावाहुरी अति प्रभावितलाई तत्काल त्रिपाल वितरण गरिने
चैत १०, हावाहुरी अति प्रभावित गाविसमा जिल्ला विकास समितिमा मौजदात रहेको त्रिपाल र टेण्ट तत्काल वितरण गर्नका लागि जिल्ला दैवि ...
जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ ? खुल्यो रोजगारीको सूचना दिने सरकारी वेबसाइट
रोजगारीको खोजी हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने आफ्नो लागि आवश्यक जागरिक अब सरकारी वेबसाइटमै गएर पनि खोज्न सकिने भएको छ । सरकारले युवालाई रोजगारसम्बन्धी सूचना दिन http://www.jobkhoj.gov.np वेबसाइट सञ्चालनमा ...